Hamba ngeNkqubo yoMzekeliso yeeNcwadi zaBantwana
NguLisa Rojany Buccieri, Uqoqosho lukaPeter
Qala ngemibala yeepensile emnyama namhlophe.
I-Tim Bowers, njengabaninzi ababonisi, ineenkqubo ezintathu zokuprinta ngepensile. Uqala ngemibala yeepensile ezimnyama-mhlophe.
Kuxhomekeke kumphathi wezobugcisa kunye nokuphendula komhleli kulo mzobo, uTim anganikwa ukuqhubela phambili, okanye anganikwa amanqaku otshintsho emva koko avunyelwe ukuba aqhubeke inyathelo lesibini: iipensile.
Yiya kwiipensile ezigqityiweyo.
Emva kokuba egqibile ukuyidweba yonke incwadi, uTim uya kwinqanaba lesibini: imizobo yeepensile, ekwabizwa ngokuba ziipensile. Kuboniswe imvelaphi ipensile egqityiweyo.
Yenza ipensile eyahlukileyo yangaphambili egqityiweyo ukuba iceliwe.
Nangona ekhetha ukwenza ubugcisa obunobunye kwinqanaba ngalinye, umpapashi wakhe Lihlabathi Elikhulu, Ihagu encinci ucele ukuba adale umphambili kunye nemvelaphi ngokwahlukeneyo kuzo zombini iipensile kunye namanqanaba okugqibela obugcisa ukwenzela ukuvumela ukuphindaphinda kunye nokuhluzwa kwemifanekiso kulandelelwano loopopayi kunye neeapps zeepilisi kunye nee-smartphones.
Ngaphambi kokuba usebenze kwimifanekiso eqweqwe, uphawu lokugqibela lwenkqubo yomzekeliso lwenza ubugcisa bemibala.
Kwi Lihlabathi Elikhulu, Ihagu encinci, UTim usebenza ngokuhlamba i-acrylic kwiBristolboard. Ngamanye amagama, upeyinta ngokucoceka okucocekileyo kakhulu kwepeyinti ye-acrylic, esongeza umbala kunye nokugcwala njengoko ehamba, eshiya iindawo ezingathandekiyo zihlala zihlala. Njengoko esebenza ngokuhambisa ngaphezulu nangombala ongaphezulu, into ebonisiweyo inikwa ubukhulu kunye nobunzulu.
Yenza ubugcisa bekhava.
Isembozo sencwadi yemifanekiso simahla kubo bonke owona msebenzi ubaluleke kakhulu: ukuthengisa incwadi kwisithuba se-nanosecond. Ukuba ikhava yencwadi yabantwana ayithathi ingqalelo yomthengi kwi-microsecond kwaye ibambelele kuyo ixesha elide ngokwaneleyo ukuba ayithathe incwadi, isilele emsebenzini wayo.
Ngaba u-pliva 334 unokuphakama
Qaphela ukuba bunjani ubuntu, intshukumo, kunye neveve ezifakwe kule ndawo yobugcisa.
Gqibezela uyilo lwekhava.
Qaphela indlela iileta ezotywe ngesandla, indawo emhlophe eyaneleyo, kunye nezinye izinto zoyilo zihlangana ukuze zithengise incwadi kwikhava yokugqibela. Kwaye, igama lombhali wodumo libekwe ngokubalaseleyo.
izitulo zokuthambisa ukukhulelwa
isilayidi ngaphandle kweglu okanye iborax
amayeza okunyakaza kwesifo
yintoni igesi x
Iintambo zejumper zinxibelelana njani
I-lamotrigine 25 mg ithebhu